चिन्ता गरौं, सुखी बनौं
पहिले सबैले भन्थे, ‘चिन्ताले मानिसलाई चितामा पुर्‍याउँछ ।’ उहिलेका कुरा खुइले । अहिले त चिन्ता गरौं, सुखी बनौं भन्ने जमात पो फैलँदो छ । मलाई लाग्थ्यो जताततै व्याप्त बेरोजगारी, अभाव, महँगी, भ्रष्टाचारले गर्दा अहिले नेपालीहरू चारैतिर चिन्ताले घेरिएका होलान् । त्यसमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहरको कहरले चिन्ताको भारी थपेको होला । तर त्यसो होइन रहेछ । वास्तवमा नेपालीहरू सुखी रहेछन् । चिन्ता गरेपछि सबै लफडाबाट मुक्ति पाइने रहेछ । त्यै भएर त केही महीनाअघि के जाति अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपाललाई विश्वकै धेरै खुशी देशहरूको सूचीमा पारेको रहेछ ।
चिन्ता गर्नुको एउटा प्रमुख फाइदा त शारीरिक गतिविधि गरिरहने झञ्झटै पर्दैन । हरेक दिन कम्तीमा एक घण्टा ‘चिन्ता थेरापी’ गर्ने हो भने पनि यो मर्निङ वाक, इभिनिङ वाकमा जाने, जिमखाना जाने, योगास्योगा गर्ने झञ्झट गरिरहनै पर्दैन ।
जसले कुनै कुराको अभाव वा बाधा झेल्नुपर्दैन, उनीहरू पनि चिन्तित देख्ता अचम्म लाग्थ्यो । धनीहरू, तस्करहरू, ठूला पदमा पुगेकाहरू, ठूला नेता, सरकारमा बसेकाहरू सबै चिन्तित । किन होला त भनेर बुझ्दै जाँदा यस्तो तथ्य फेला पर्‍यो ।
नेताहरूलाई देश र जनताको विषयमा निकै चिन्ता लाग्दो रहेछ । उनीहरू देश विकासका विषयमा, पशु अधिकारदेखि वातावरण विनाशका विषयमा चिन्तित, धार्मिक सद्भावका लागि चिन्तित, कुनै खास धर्मको विकास भएको वा नभएकोमा चिन्तित हुँदा रैछन् । त्यै भएर उनीहरू जहाँ पुगे पनि हरेक विषयमा, भाषणमा होस् या प्रेस विज्ञप्तिमा, गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दा रहेछन् । यसो गरेर उनीहरू जनतालाई सुखी बनाउन पो लागेका रछन् । हाम्ले नबुझेर पो नेतालाई गाली गर्‍या रैछम् ।
प्रत्येक पदधारी, बर्दीधारी पनि जनताका सेवाका काममा चिन्तित हुँदा रहेछन् । जस्तै, प्रहरी प्रशासनलाई जहिले पनि ठूल्ठूला अपराधी, तस्कर कसरी पक्रने भनेर चिन्ता । कतिपय उद्योगी व्यापारीहरूलाई उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामान र सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने चिन्ता, बुद्धिजीवीहरूलाई श्रमजीवी र गफजीवीहरूको चिन्ता । त्यसैले हरेक पत्रपत्रिकाका लेखमा बुद्धिजीवीहरूको चिन्ता छताछुल्ल पोखिएको हुन्छ । चिन्ता गरेमा देशको र आफ्नै पनि खुशी बढ्ने रहस्य उनीहरूले पत्ता लगाइसकेका रहेछन् ।
चिन्ता गर्ने बानीले ठूला मान्छेलाई मात्र होइन, सामान्य मनुवालाई पनि थुप्रै फाइदा हुँदो रहेछ । एउटा प्रमुख फाइदा त शारीरिक गतिविधि गरिरहने झञ्झटै पर्दैन । हरेक दिन कम्तीमा एक घण्टा ‘चिन्ता थेरापी’ गर्ने हो भने पनि यो मर्निङ वाक, इभिनिङ वाकमा जाने, जिमखाना जाने, योगास्योगा गर्ने झञ्झट गरिरहनै पर्दैन । जसलाई आफ्नो स्वास्थ्यको अलिकति मात्र पनि चिन्ता छ भने आफ्नो दैनिकीमा एक घण्टा चिन्ता गर्ने काम शुरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्छन् चिन्तायोगीहरू ।
जब मानिसले चिन्ता गर्न शुरू गर्छ, तब पहिलो फाइदा त उसको वजन घट्न शुरू गर्छ । उसले जे जे खाए पनि शरीर नियन्त्रणमा रहन्छ । चिन्ताको सच्चा प्रभाव शरीरमा तब पर्छ, जब चिन्तित हुने मान्छेमा ‘चिन्ता थेरापी’प्रति सच्चा श्रद्धा र विश्वास हुन्छ । अर्थात् चिन्तामा पनि इमानदारी आवश्यक पर्छ । चिन्ता शुद्ध हुनुपर्छ, २४ क्यारेट सुनजस्तै ।
चिन्ता गर्नु भनेको स्वास्थ्यकै दृष्टिकोणले पनि एकदमै आवश्यक कुरा हो । यदि हाम्ले ठीकसँग चिन्ता गर्न सिक्यौं भने सम्झनोस् कि स्वस्थ भइयो । पुरानो जमानामा जति पनि महान् व्यक्तिहरू भए, जति दीर्घ जीवन बाँचे, ती सबै चिन्ता गर्ने बानीकै कारण रहे । भगवान् रामलाई नै हेर्नोस् न । पहिला उनी राज्य गुमेको कारणले चिन्तित बने । पछि सीता अपहरणका कारण । फेरि धोबीले गर्दा आफ्नो बदनामीका कारण । फेरि आफ्ना छोराहरूद्वारा आफ्नो सेनाका पराजयका कारण । पछि फेरि सीताको धर्ती प्रवेशका कारण । यी तमाम कुराका कारण उनी चिन्तित भइरहे र कालान्तरमा मर्यादा पुरुषोत्तम कहलिए र आज पनि पूजित भइरहेका छन् ।
कृष्णदेखि क्राइस्टसम्म, माक्र्सदेखि महन्तसम्म सबै चिन्ताकै पछि लागेका हुन् । श्रीकृष्ण पहिले १६ सय गोपीनीका साथ चिन्तित हुन्थे । पछि १६ हजार रानीका । यस्तै चिन्ता गर्दा गर्दै उनी पछि १६ कलायुक्त सम्पूर्ण अवतार मानिए । कविरदासले त झन् दुःख र चिन्ताकै कविता लेखिरहे र दुब्ला पातला रहेर सय वर्षभन्दा बढी बाँचे । हाम्रै प्रधानमन्त्रीलाई हेर्नुस् न । सबैले समर्थन गर्दा चिन्ता थिएन, स्वास्थ्य पनि ठीक थिएन । सत्ताको किचलोले चिन्ता थपिएपछि सबै रोगलाई जितेर सबै विपक्षीलाई अहिलेसम्म परास्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ ।
हेर्नुस् त, मानिसको सरदर आयु बढेको छ । किनकि उनीहरू अचेल सधैं चिन्तित रहन्छन् नि त ! एउटै मान्छेको पीसीआर टेष्ट गर्दा सरकारी रिपोर्टले कोरोना नेगेटिभ छ भन्छ । तर तुरुन्तै निजी अस्पतालले पोजेटिभ रिपोर्ट दिन्छ । अनि बढ्दैन त चिन्ता ? दुनियाँ जटिल बन्दो छ । र मानिसका चिन्ता पनि जटिल र कुटिल बन्दै छ ।
कतिपयले आफ्नो व्यक्तिगत चिन्ताको स्तरलाई उठाएर देशसम्म लैजान्छन् । देशको चिन्ता सकिएपछि पनि जसको चिन्ताको ‘स्टक’ खत्तम हुँदैन, उनीहरू आफ्ना चिन्ताको गलबन्दीलाई पूरा विश्वमै तन्काउँछन् । उनीहरूलाई बरु आफ्ना वरपर वा छिमेकमा के समस्या परेको छ मतलव हुन्न, तर अमेरिका, बेलायत वा भेनेजुयेलामा के हुनुपर्ने र के भइरहेछ भन्नेमा चिन्ता छ । अझ चन्द्र वा मंगल ग्रहसम्म उनीहरूको चिन्ताको तार पुगेको हुन्छ । किनकि यो उनीहरूले जताततैबाट सुखी हुने प्रयास गरिरहेको प्रमाण हो ।
चिन्ताका फाइदाका बारेमा भनिसाध्यै छैन । यदि तपाईंले अहिलेसम्म चिन्तित हुन सिक्नुभएको छैन भने बुझ्नोस कि तपाईंको वास्तविक जीवन शिक्षा अधुरो छ, अपुरो छ । त्यसैले सुख पाउन चाहनुहुन्छ भने अब उठ्नोस् र हरेक विषयमा गम्भीर चिन्ता गर्न शुरू गर्नोस् । नत्र अरूभन्दा पछि पर्नुहोला है !